မတားဘူး။ – တရားဝင်ပါတီဂိမ်း လှည့်စားမှုများ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
မတားဘူး။ – တရားဝင်ပါတီဂိမ်း လှည့်စားမှုများ&Hack
၎င်းသည် စကားလုံးဂိမ်းအားလုံး၏ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။! သင့်ဖုန်းပေါ်တွင် အိမ်ပါတီပွဲတစ်ခုကို လွှင့်ပစ်ပြီး ဗီဒီယိုချတ်ဖြင့် Taboo ကစားပါ။! ခွဲလိုက်ပါ။2စကားလုံးကိုဖော်ပြရန် အသင်းအဖွဲ့များနှင့် အလှည့်ကျလုပ်ဆောင်ပါ။ – ကတ်ပေါ်ရှိ စကားလုံး သို့မဟုတ် မည်သည့်စကားလုံးကိုမျှ မသုံးပါနှင့်! အချိန်တိုင်းစက်မကုန်မီ သင့်အဖွဲ့သည် စကားလုံးများကို တတ်နိုင်သမျှ ခန့်မှန်းရပါမည်။!
Charades နှင့် Heads Up ကဲ့သို့ပင်!, Taboo သည် လူကြီးများနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် ပျော်စရာဖြစ်သည်။. RED ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို APPLE ကို ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲ။, အသီး, PIE, CIDER နှင့် CORE အားလုံးသည် တားမြစ်ချက်များဖြစ်သည်။? တားမြစ်စကားလုံးကို မှားသုံးမိရင်, တခြားအသင်းတွေက တုန်လှုပ်ချောက်ချားပြီး အမှတ်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။! သင့်သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့် ဆူညံစွာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။. တစ်နေရာတည်းမှာ အတူရှိနေရင် ဒီအက်ပ်က အလုပ်လုပ်ပါတယ်။, သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုချတ်မှတစ်ဆင့် ခွဲထွက်ပါ။! အသံတိတ်, timer, ကတ်များနှင့် ဗီဒီယိုချတ်များတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ – သင်လိုအပ်သမျှသည်သင်၏ဖုန်းဖြစ်သည်။. မြန်မြန်စဉ်းစားပါ။, မြန်မြန်ပြောပြီး ပြိုင်ပွဲကို ချေမှုန်းပါ။!
– ဂိမ်းအတွင်း ဗီဒီယို စကားပြောခန်း – အပိုအက်ပ်များ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်များ မလိုအပ်ပါ။! ဂိမ်းကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ကစားပါ။ 2-6 သူငယ်ချင်း, သင်ဘယ်သွားသွား!
– အတူတူအခန်းတွင်ကစားပါ။ – ဖုန်းတစ်လုံးတွင် Local Party Mode ကိုဖွင့်ပါ။, အကန့်အသတ်မရှိကစားသမားများနှင့်!
– AD-အခမဲ့ဂိမ်း – သင့်အား စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် ကြော်ငြာလုံးဝမပါဘဲ ပျော်ရွှင်ပါစေ။!
– နှစ်ယောက်ကစားနည်း – ထူးခြားသော 2-ကစားသမားမုဒ်ဖြင့် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကို စိန်ခေါ်ပါ။!
– 500 ကတ်များ – မူရင်းဂိမ်းမှ ကတ်များ ပါဝင်သည်။!
– အပိုကတ်ထုပ်များ – သင့်ဂိမ်းကို လန်းဆန်းနေစေရန်အတွက် ပျော်ရွှင်စရာပုံစံအထပ်များကို ဝယ်ယူပါ။. ယင်းတို့ ပါဝင်သည်။:
… နှင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ နက်နဲသောအရာနှစ်ခု!
ဂိမ်းတစ်ခုစတင်ပြီး သင့်သူငယ်ချင်းများကို ဖိတ်ခေါ်ပါ။. သို့မဟုတ် သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် အက်ပ်အတွင်း ချတ်အဖွဲ့ကို ဖန်တီးပြီး သင့်ချတ်မှ ဂိမ်းတစ်ခုကို စတင်ပါ။!
Taboo သည် ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ 2-6 အွန်လိုင်းကစားသမားများ, ဗီဒီယို chat တို့ ပါဝင်ပါသည်။. ဆိုလိုတာက သင်ဟာ အတူမနေနိုင်ရင်တောင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ကစားနိုင်ပါတယ်။. သင်နှစ်သက်သလောက် သူငယ်ချင်းများစွာနဲ့လည်း ကစားနိုင်ပါတယ်။, လူကိုယ်တိုင်, Local Party Mode ဖြင့်.
အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး သင့်အဖွဲ့ကို နာမည်ပေးလိုက်ပါ။.
သဲလွန်စပေးသူကို အဖွဲ့ A မှ တာဝန်ပေးအပ်သည်။
အဖွဲ့ A မှ သဲလွန်စပေးသူကို အက်ပ်က ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။. နောက်ဝိုင်းမှာ, အဖွဲ့ B မှ သဲလွန်စပေးသူသည် ၎င်းတို့၏ အလှည့်အပြောင်းဖြစ်သည်။.
Team A မှ သဲလွန်စပေးသူသာ, နှင့် Team B အားလုံး, ကတ်ကိုကြည့်နိုင်သည်။. သဲလွန်စပေးသူသည် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အား စကားလုံးဟူသည်ကို ပြောပြရန် ကြိုးစားရမည်ဖြစ်သည်။, ဘာစကားမှ မပြောဘဲ၊.
Team B သည် Buzzer တွင်ရပ်တည်သည်။
သဲလွန်စပေးသူသည် Taboo စကားလုံးတစ်လုံးပြောပါက Team B သည် အသံမြည်လာလိမ့်မည်။!
အချိန်မကုန်မီ သင့်အဖွဲ့သည် စကားလုံးများကို တတ်နိုင်သမျှ ခန့်မှန်းရပါမည်။. မင်းအနိုင်ရလိမ့်မယ်။ 1 မှန်ကန်သော ခန့်မှန်းချက် အမှတ်.
ကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။2အလှည့်တိုင်းကတ်များ. ပြီးနောက်, တခြားအသင်းတွေ ရလိမ့်မယ်။ 1 ကတ်တစ်ခုကျော်သွားတိုင်း အမှတ်ပေးပါ။.
ကစားသမားတိုင်းသည် သဲလွန်စပေးသူအဖြစ် အလှည့်အပြောင်းဖြစ်သောအခါ ဂိမ်းသည် ပြီးဆုံးသည်။. သို့မဟုတ် အဖွဲ့တစ်ခုစီသည် သဲလွန်စပေးသူအဖြစ် အလှည့်အပြောင်းအရေအတွက် တူညီသည့်အခါ.
အားလုံး တစ်နေရာတည်းမှာ ရှိနေရင်, သင်နှစ်သက်သလောက် သူငယ်ချင်းများစွာနဲ့ ကစားနိုင်ပါတယ်။, ဖုန်းတစ်လုံးတည်းကို အသုံးပြုခြင်း။!
– ခွဲလိုက်ပါ။2အသင်းများ
– သဲလွန်စပေးသူဖြစ်ရန် အလှည့်ကျလုပ်ဆောင်ပါ။
– သင်သာ သဲလွန်စပေးသူဖြစ်လျှင်, သင့်အဖွဲ့သည် စခရင်ကို မမြင်ရကြောင်း သေချာပါစေ။
– အကယ်၍ သင်သည် ဆန့်ကျင်ဘက်အသင်းတွင် ရှိနေပါက၊, သဲလွန်စပေးသူနောက်တွင် ထိုင်ပါ သို့မဟုတ် ရပ်ကာ တားမြစ်စကားလုံးသုံးပါက ကြွေးကြော်ပါ။
– သဲလွန်စပေးသူသည် buzzer ကိုနှိပ်ရပါမည်။
နှစ်ယောက်ကစားမုဒ်တွင် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးနှင့်လည်း ကစားနိုင်သည်။!
– တားမြစ်ထားသော စကားလုံးကို သုံးပါက သင့်ကိုယ်သင် နှောင့်ယှက်ပါ။
စကားလုံးမာစတာဖြစ်လာပြီး သင့်ပြိုင်ဘက်အားလုံးကို သင်ကိုယ်တိုင် အနိုင်ယူလိုက်ပါ။.
အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် ကစားပါ။, သင်ဘယ်သွားသွား!
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, ဂိမ်း, Official, Party, မတားဘူး။
← ဂူတူးစက် – လှိုင်သာယာ&Hack Farmington: ကောင်းသော MyFarm အဟောင်း – လှိုင်သာယာ&Hack →
Figure Fantasy – လှိုင်သာယာ&Hack
Rocket League Sideswipe – လှိုင်သာယာ&Hack
Wildshade: fantasy horse races – လှိုင်သာယာ&Hack